Taliban dia mifehy tanteraka ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenen'i Kabul Hamid Karzai rahampitso
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana Afghanistan » Taliban dia mifehy tanteraka ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenen'i Kabul Hamid Karzai rahampitso
Vaovao Mafana Afghanistan • Airlines • Airport • Aviation • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Crime • Vaovaom-panjakana • Vaovao • Safety • Tourism • Fitaterana • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Vaovao isan-karazany
Ny Taliban dia manao fifampiraharahana amin'i Torkia sy Qatar momba ny fitantanana teknika ny asa ao amin'ny seranam-piaramanidina.
Taliban hananana ny fibaikoana ny seranam-piaramanidina Kabul taorian'ny fisintahan'ny Etazonia.
Taliban dia maniry an'i Torkia sy Qatar hanampy amin'ny fampandehanana ny seranam-piaramanidina Kabul.
Niala tao Afghanistan ny tafika amerikana tamin'ny 31 aogositra.
Araka ny tatitra farany, ny Taliban dia handray fifehezana feno ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenen'i Kabul Hamid Karzai rahampitso, taorian'ny fialan'ny tafika amerikana avy any Afghanistan tamin'ny talata 31 aogositra.
Toy ny taloha tatitra talohan'izay, ny Taliban dia nanao fifampiraharahana Tiorkia sy Qatar mikasika ny fitantanana teknika ny asa ao amin'ny seranam-piaramanidina. Mbola tsy nifanaraka ny ankolafy.
Talohan'izay, ny mpitondra tenin'ny birao politika Taliban any Qatar, Mohammad Suhail Shaheen, dia nilaza fa ny hetsika mahery fihetsika dia manantena ny amin'ny fisintonana tanteraka ny tafika vahiny avy any Kabul's Seranam-piaramanidina iraisam-pirenen'i Hamid Karzai.
Taorian'ny nanambaran'ny Etazonia ny fiafaran'ny asany naharitra 20 taona tany Afghanistan sy ny fanombohana ny fisintotan'ny tafiny, dia nanafika ny tafiky ny governemanta Afghan ny Taliban. Tamin'ny 15 Aogositra, niditra an-tsokosoko tao Kabul ireo mpiady Taliban nefa tsy tojo fanoherana akory, nametraka fifehezana feno ny renivohitra Afghan tao anatin'ny ora vitsivitsy.
Nandao ny firenena ny filoha afrikanina Ashraf Ghani, raha ny filoha lefitra Amrullah Saleh kosa dia nanambara ny tenany ho filoham-panjakana ary niantso ny fanoherana mitam-piadiana ny Taliban. Firenena maro no nanao fanesorana vonjimaika ny olom-pireneny sy ny mpiasan'ny masoivoho avy any Afghanistan taorian'ny fanjanahana an'i Taliban.